PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - VUKA UZITHINTITHE:
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Izindaba - 1. UYIBONA NGANI INDODA EKUTHANDA NGOKWEQINISO?
PASTOR, ngicela ukubuza ukuthi indoda ekuthanda ngokweqiniso uyibona ngani?
IMPENDULO: Ubuza umbuzo wokubuzwa futhi okunzima kakhulu ukuwuphendula. Ayikho into enzima la emhlabeni njengokubona nokuthola umuntu okuthanda ngokweqiniso.
Le nto yothando ngingasho nje ngithi iyisibusiso esivela kujehova futhi kakusizi ukuthola umuntu okuthandayo kanti wena kawumthandi kodwa-ke ukusika elijikayo embuzweni wakho, zikhonyana izimpawu okufuneka uzibone ngaphambi kokuba uzijikijele kuye.
Ezintweni ongazibheka singabala inhlonipho - akufanele uchithe isikhathi sakho nomuntu ongakuhloniphi. Ngisho anganamaphutha angakanani umuntu kodwa nje uma ekuhlonipha futhi nilalelana alukho uthando oluyodlula lolo emhlabeni.
UMFUNDI wephephandaba uthi usecabanga nokuzibulala ngenxa yobunzima bempilo. Washonelwa ngabazali emuva kwalokho izinto zakhe kazihlangani. Nalapho ehlala khona kubo kamfana uyahlukumezeka uyashawa ucela izeluleko kupastor Zondo.